လူငယ်နဲ့ ပရဟိတအလုပ် ၁ | Mizzima Myanmar News and Insight
လူငယ်နဲ့ ပရဟိတအလုပ် ၁
ပရဟိတအလုပ်ကို အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတစ်ပါးအား ကူညိီဝိုင်းဝန်းရေးအလုပ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်ဟာ အရေအတွက် အကန့်အသတ်နဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ အခြားသူတစ်ဦးမှအစ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအဆုံး ကူညီခြင်းနဲ့ မြင့်မားချမ်းသာသူဖြစ်ပစေ ဆင်းရဲသူဖြစ်ပစေ၊ အသားအရောင် မတူသူဖြစ်ပစေ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုမတူသည်ဖြစ်ပစေ၊ လူမျိုး မတူသူဖြစ်ပစေ၊ မိုးရွာရွာ နေပူပူ ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကူညီရတဲ့အလုပ်ကို ပရဟိတအလုပ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်ဟာ ယေဘုယျပြောရင် နိုင်ငံရေးအလုပ်ရဲ့ မြစ်ဖျားလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ပရဟိတစိတ်မရှိဘဲ စစ်မှန်ကောင်းမွန်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမား မဖြစ်နို်င်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေ ဘယ်လောက်ပဲထွေထွေပြားပြား ဖြစ်နေပါစေ ပရဟိတက ဖြာလာတဲ့နိုင်ငံရေးဟာ စစ်မှန်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက်ပါပဲ။
ကျနော် ဒီကနေ့ ရေးလက်စ လူငယ်နဲ့ စကားပြေအရေးအသားအမှားပြဿနာဆောင်းပါးကို ခဏရပ်ပြီး ဘာ့ကြောင့် ပရဟိတအလုပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးလာရသလဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်က ပရဟိတစိတ်အရ မိသားစုတစ်စုကိုကူညီခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တချို့အကြောင်း အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖတ်ခဲ့ကြရလို့ ဒီလူငယ်တွေနဲ့နွယ်ပြီး ဒီလူငယ်တွေ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ပရဟိတအလုပ်အပေါ်မူတည်ပြီး ဒိီအချက်ကိုတော့ လူငယ်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ရေးလက်စ ဆောင်းပါးကိုခဏရပ်ပြီး အဲဒီ ပရဟိတအလုပ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ဒီကနေ့ဆွေးနွေးလိုက်တာပါ.
ပရဟိတအလုပ်ကို တချို့ကတော့ အမြင်တမျိုးနဲ့မြင်ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး သတိပြုသတိထားစဉ်းစားရမယ့်သဘောရှိလို့ အဲဒီအမြင်တမျိုးဆိုတာကို စတင်ပြောပြဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်ဟာ ဖါထေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဦးထုပ်အဟောင်းကို ဖုန်ခါပြီး အပ်နဲ့ ပြန်ချုပ်ပြီး ပြန်ဆောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ဦးထုပ်အသစ်ကောက်ဆောင်းတဲ့ အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ လူမှုရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်လာပြီး ခဏပဲခံတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အများအားဖြင့် မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင် ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအလုပ်ဆိုတာက စနစ်တစ်ခုကို ဖြိုချပြီး စနစ်အသစ်တစ်ခု ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အလုပ် တနည်းအားဖြင့် တော်လှန်ရေးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ပရဟိတအလုပ်ကြတော့ မှားယွင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အနာအဆာတွေကို ဆေးမြီးတိုနဲ့လိုက်ကုတာမျိုး၊ အပေါက်ဖါတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ မြင်တဲ့အမြင်လည်း ရှိကြပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်ဟာ ဒီနေရာမှာလုပ်ရင်းနဲ့ ဟိုနေရာမှာ အလားတူပြဿနာတွေ ပေါ်လာတာကို မတားဆီးနိုင်ဘူး။ ဆန်စင်ရာကျည်ပွေ့လိုက်သလိုဖြစ်တာမို့ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ ဆိုလိုတာက ပရဟိတအလုပ် နောက်ထပ်အမြဲတန်းလုပ်ရလေအောင် တောင်းဆိုစိန်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့အလုပ်သာလျင်ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောကြတာ ရှိပါတယ်။
ပရဟိတကို နောက်ထပ်ပေးတဲ့ဥပမာက ငါးပွက်ရာငါးစာချတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တယ်။ မှားယွင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ အထိအခိိုက်တွေကို မူအရကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘဲ တခဏသာသက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း ယူဆကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပရဟိတအလုပ် မရှိရင်တော့ မဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ ပရဟိတစိတ်ဟာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံး ပြိုလဲကျမသွားစေရေး ကျားကန်ကြတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာ တစ်ခုဖြစ်နေပါသေးတယ်။ လူသားဟာ လူသားအချင်းချင်း ကူညိီမှိုင်းမရေးအလုပ်ကိုမှ မခင်တွယ်ရင် လူသားကမ္ဘာကြီးဟာ ရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်ပြန်ပါတယ်။ အဲသလောက်အထိ ပရဟိတအလုပ်ရဲ့တန်ဘိုးက မြင့်နေပြန်ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်ဟာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်သလို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဆုံးဖြတ်ပြိီးမှ လုပ်ရတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဟိုရက်ပိုင်းက ဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးရတဲ့မိသားစုကို ကူညီကြတဲ့ လူငယ်တွေဟာ ပြင်ဆင်ပြီးမှ စဉ်းစားပြီးမှကူညိီခဲ့ကြတာပါ။ ပြင်ဆင်ချိန်ယူလို့ ရတဲ့ ပရဟိတအလုပ်ပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရှေ့မှာတင်ပဲ ကားတိုက်ခံရလို့ လူတစ်ယောက် လမ်းဘေးမှာလဲကျသွားတဲ့အခါ အသက်ကိုအချိန်မီကယ်တင်ရေး လုပ်ပေးရတဲ့ ပရဟိတအလုပ်ကြတော့ လျပ်တပျက်ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြတော့ အချိန်ယူစဉ်းစားပြီးမှလုပ်ကြကိုင်ကြရတဲ့ပရဟိတအလုပ်နဲ့ လုပ်ဟန်ချင်းမတူဘူးပေါ့။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပစေ။ ပရဟိတအလုပ်ဟာ ကျနော်တို့အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ လူငယ်တွေဟာ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ ပရဟိတစိတ်မြင့်မားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ လူအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီမေတ္တာထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှု ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ လူငယ်နဲ့ပရဟိတစိတ်ဟာ တွဲနေသင့်တယ်လို့တောင် ထင်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပရဟိတစိတ်ဟာ လူငယ်တိုင်းမှာကော ရှိပါရဲ့လား။ လူငယ်တိုင်း ပရဟိတစိတ် ရှိကြပါရဲ့လား။ တကယ်တော့ ပရဟိတစိတ်ဟာ ဘယ်လူသားမှာမဆို အခြေခံအားဖြင့် ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ လူငယ်တိုင်းမှာ ပရဟိတစိတ် ရှိကြတာချည်းပါပဲ။ ပရဟိတစိတ် အနည်းနဲ့အများ ရှိတာချင်း မတူကြတာပဲရှိတာပါ။
ပရဟိတစိတ်ဟာ သူ့အခြေခံအားဖြင့်ဆိုရင် လူငယ်တိုင်း လူတိုင်းမှာ ရှိနေကြတာမှန်ပေမယ့် အထက်ကဆိုခဲ့သလို ရှိတာချင်းတူသည့်တိုင် ဘာ့ကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနည်းအများကွာခြားသွားရသလဲ။ ဒီိလိုဖြစ်ရတာဟာ လူငယ်တိုင်း လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ နှလုံးသားဓါတ်ခံအပေါ်မူတည်ပြန်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ လူတွေရဲ့ပရဟိတစိတ်ကို လျှော့ပါးထိခိုက်စေတဲ့ တခြားအယူအဆအမှားတွေ၊ အစွန်းရောက်မှုတွေ၊ ကိုယ်စားပြုစဉ်းစားမှုတွေဆိုတဲ့ အရာတွေဟာ လူတွေရဲ့ အခြေခံပရဟိတစိတ်ကို ပွန်းစေ ပဲ့စေ လျှော့စေတော့တာပါပဲ။
ဥပမာ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်နေတဲ့ လူတစ်တစ်ယောက်မှာ သူ့မှာ သူယုံကြည်တဲ့ဘာသာဝင်မဟုတ်ရင် ဘာသာမတူသူတွေအပေါ် ရိုင်းပင်းကူညီဖို့ တုန့်ဆိုင်းနေတတ်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်နေတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ထားရှိသူဆိုရင်လည်း လူမျိုးမတူတဲ့သူတွေအပေါ် ကူညီရိုင်းပင်းဖို့ ၀န်လေးနေတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါ အခြေခံစိတ်ဓါတ်ကိုယ်နှိုက်က မေတ္တာဓါတ်အားနည်းနေပြန်ရင်လည်း ပရဟိတအလုပ်အပေါ် အားစိုက်ဖို့ ခွန်အားနည်းပါးနေတတ်ပြန်ပါတယ်။ ပရဟိတအလုပ်ကို ဘယ်သူလုပ်လုပ် သံသယရှိနေတတ်ပြန်ပါတယ်။ အရေးကြိီးတာကို ပထမမထားဘဲ အရေးမကြီးတာကို ရှေ့မှာထားစဉ်းစားပြီး ပရဟိတအလုပ်လုပ်ဖို့ လက်နှေးနေတတ်ပြန်ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်ဟာ ကိုယ်ကျိုးအထိုက်အလျောက်စွန့်ရခြင်းနဲ့ အဆုံးစွန်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရခြင်းအလုပ်ဆိုတဲ့ အဲဒီအလုပ်နှစ်ခုကြားမှာ ရှိပါတယ်။ မေတ္တာဓါတ်ခံအနည်းအများအပေါ်မှာ မူတည်ပါ။ ဘယ်ပယောဂ ဘယ်မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆရဲ့လက်အောက်ခံ ဟုတ်ခြင်းမဟုတ်ခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေ ဖွံံံ့ဖြိုးခြင်း မဖွ့ံဖြိုးခြင်း ဖြစ်ရပါတယ်.
ကဲ ဒီကနေ့တော့ ပရဟိတအလုပ် သရုပ်ခွဲစဉ်းစားတဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါကြရင်တော့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပရဟိတအလုပ်အပေါ် ဘယ်လိုချဉ်းကပ်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လက်ခံသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို ဆက်ပြီးသွားပါမယ်။
လူငယ်များ ပရဟိတစိတ် ပွားများကိုင်ဆွဲနိုင်ကြပါစေ။